MOV Editor: Sida loo Edit MOV Faylal ay ku Mac / Win (Windows 8 ka mid ah)
> Resource > Video > Sida loo Edit MOV Video Faylal ay ku Mac / Win (Windows 10 ka mid ah)
MOV waa uun nooc ka mid ah video caan ah oo ka mid ah dadka doorbidayey in video Raaxo. Si kastaba ha ahaatee, mararka qaarkood waxaad ka heli kartaa qaar ka mid ah videos MOV aad daawato ma ahan wax fiican in tayada. Dhab ahaantii aad edit karaa files MOV keligaa. Dhammaan waxa aad u baahan tahay waa Editor MOV in ay kaa caawiyaan in aad shaqo ah.
Halkan Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) si weyn lagu talinayaa. Sidaa daraadeed, aad awoodaan in ay wax ka bedel iyo shakhsiyeeyo MOV videos aad la qoraalka, filter iyo kala guurka saamaynta hodan ah ee wadaagga ah ee iPhone, YouTube, iwm ama gubi in DVD. Hadda hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan MOV this Video Editor oo raac talaabooyinka ku saabsan sida loo si fudud xaalkaa file MOV ah.
Easy in la isticmaalo MOV Editor:
Simple, kooban, interface moodada, fududahay in la isticmaalo, kaliya jiidi-n-dhibic u baahan tahay iyo dhowr qasabno.
Edit MOV video la muuqaalada aasaasiga ah sida dalagga, jar, jarid, iyo kala dheeri ah.
Shakhsiyeeyo qalabka tafatirka badan oo horumarsan sida Shift Janjeeri, Toos off, Jump Goo, iwm
Ku dar qoraalka, ku ganaya biyo, saamayn, dhawaaq si loo asalka video / audio.
Keydso video qaab oo kala duwan, gubi in DVD ama geliyaan online.
Maxaad Dooro Wondershare MOV Editor
Editor MOV waxa uu leeyahay interface waxtar-saaxiibtinimo oo ka dhigaysa mid u fudud in ay soo jeedin asalka videos galay shuqullada tahay. Navigation The cad ka dhigaysa oo dhan howlgal video tafatirka ee fudud.
Si fudud xaalkaa MOV video qalabka sida goo, dalagga, cut, kala, isku shaandheyn iyo isu geeyo videos. Set video dhalaalka, bedelkeeda, saturation iyo cado si kor video tayo leh.
Raadka cajiib ah Rich
Video Editor Bixisaa sida diirada kala duwan oo waxtar leh iyo saamaynta gaar ah sida PIP, kala guurka, Intro / credits iyo codad, taas oo shaki heerka ku xiga idinka qaadan doonaa video.
Kala duwan Output Options
Video Editor Kuu ogolaanayaa inaad si ay u wadaagaan video on macruufka iyo qalabka Android, iyo sidoo kale iyaga u geliyaan in ay Facebook, YouTube, oo ayan u hurin si ururinta DVD ah.
Sidee si fudud Edit MOV Video:
Si fudud qabsato dhererka MOV video adigoo codsanaya shaqo Split. Si aad u kala jabeen video oo dhan galay clips gaaban, kaliya dhaqaaqo slider si ay boos kasta oo meesha aad rabto in aan kala tagno on Timeline video ah. Markaas riix icon manqaska, ama xaq u riix video in ay doortaan "Split" doorasho.
2. Ku biir MOV Video
Si aad ugu biirtid dhowr MOV videos wada, kaliya aad u baahan tahay in meeshaa oo dhan files video on waqtiga, qabsadaan si ay beegsadeen "Abuur" si ay u dhoofiyaan.
Waxa kale oo laga yaabaa in aad rabto in aad dalbato kala guurka goobta gaar ah u dhexeeya qaybaha video. Si tan loo sameeyo, u tag ah "guurka" tab iyo jiidi mid goobta kala guurka ee aad jeceshahay in aad video. Haddii aad rabtid inaad codsi ah saamayn guurka gaar ah oo dhanba videos, xaq guji saamaynta iyo dooranayaan "waxay khuseeyaan dhammaan".
3. Edit ku Audio ee MOV Video
Riix badhanka edit waqtiga ka, si ay u beddelaan khaanadda Audio oo markaas aad si fudud u dhigay kartaa mugga, garoonka, libdhi dhaqan / out of audio ah.
Waxa kale oo aad ka bedeli kartaa wadada audio asalka ah, oo kaliya xaq u guji file video iyo dooran "Audio jari lahaayeen". Markaas faylka maqal ah oo aad video isla markiiba waa la kala tagi. Waxaad si fudud u masixi karaan ama u bedelo mid cusub.
4. Ku dar Video Raadka
Wixii saamaynta cajiib ah oo dheeraad ah, guji "Saamaynta" button oo dooro mid ka mid ah sida aad doonayso inaad ka badan 50 saamaynta muuqaal ah. Markaasaa waxaa u codsan by jiitaa oo hoos ku Timeline ah. Haddii saamaynta joogo ma aha kuwo ku filan, waxaad kala soo bixi karaan dhibaatooyin dheeraad ah oo ku cusub adigoo gujinaya Download, taasi oo ah meesha ugu sareysa La interface ka.
Video Tutorial: Sida loo Edit MOV Video
Sida loo Edit Instagram Videos